အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင် ထားသလို ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်ဆင်တတ်လို့ အမြဲ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဘေဘီမောင် – Let Pan Daily
အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင် ထားသလို ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်ဆင်တတ်လို့ အမြဲ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဘေဘီမောင်
ဘေဘီမောင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို ကြည်နှုးစရာ ကောင်းပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဘေဘီမောင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….။
ဘေဘီမောင်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…။သူမဟာ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်ထဲက နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်….။ သူမဟာ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုပါမက မြန်မာဆန်ဆန် အမြဲဝတ်တတ်တဲ့ သူမ ရဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေး ဖက်ရှင်ကျမှုကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်မာ ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်…..။
အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင် ထားသလို ဖက်ရှင် ကျကျ အမြဲဝတ်ဆင်တတ်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ။အခုလည်း ဖြူဝင်းဥပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားပြန်တဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်….။ပရိသတ်ကြီးတွက် ဘေဘီမောင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
အေးခမျြးတညျငွိမျတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျ ထားသလို ဖကျရှငျကကြ ဝတျဆငျတတျလို့ အမွဲ ခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ ဘဘေီမောငျ
ဘဘေီမောငျကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနသေလို ကွညျနှုးစရာ ကောငျးပွီး သာယာပြျောရှငျတဲ့ အခဈြရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူပဲ ဖွဈပါတယျ…။ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေး ခဈြခငျမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ ဘဘေီမောငျကတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ….။
ဘဘေီမောငျကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးတှေ ကိုလဲ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ…။သူမဟာ တဈခတျေတဈခြိနျထဲက နာမညျကြျောကွား လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွဈပွီး ယနတေို့ငျ အောငျမွငျမှုရရှိနတေဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ….။ သူမဟာ ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုပါမက မွနျမာဆနျဆနျ အမွဲဝတျတတျတဲ့ သူမ ရဲ့ မွနျမာ ဝတျစုံလေးတှနေဲ့ ယဉျယဉျလေး ဖကျရှငျကမြှုကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျမာ ရထားသူလညျးဖွဈပါတယျ…..။
အေးခမျြးတညျငွိမျတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျ ထားသလို ဖကျရှငျ ကကြ အမွဲဝတျဆငျတတျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ…. ။အခုလညျး ဖွူဝငျးဥပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားပွနျတဲ့ ပုံလေးတှကေို ဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ….။ပရိသတျကွီးတှကျ ဘဘေီမောငျရဲ့ အမိုကျစား ပုံလေးတှကေို မြှဝပေေး လိုကျပါတယျ။
သှယျလြ လှပတဲ့ ကိုယျခန်ဓာအလှ ကို ထိမိစတေဲ့ အနကျရောငျ ဖကျရှငျလေး နဲ့ အထာကကြ လနျးနတေဲ့ သံသာမိုးသိမျ့
လကျရှိ အခွအေနမှော သမီးတှကေ သတ်တိအပွညျ့နဲ့ တဈတပျတဈအား ပါဝငျနကွေလို့ မှေးရကြိုး နပျပွီးဂုဏျယူနေ တဲ့ အေးသောငျး တို့ရဲ့ မမေေ
ဖြူဖြူထွေး ရဲ့ အောင်မြင်မှု နဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမ ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ကို မျှဝေ ခဲ့တဲ့ တင်မိုးလွင်
အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ အရမ်းကို လှလွန်းနေတဲ့ မေပန်းချီ (ရုပ်သံဖိုင်)